Wararka ku saabsan Oukitel: taleefannada, dib u eegista, sii deynta iyo wax badan - Androidsis | Androidsis
Waqtigan xaadirka ah waxaan ka helnaa tiro badan oo magac taleefano ah oo ku saabsan Android. Mid ka mid ah noocyadii ugu dambeeyay ee aan ku aragno marba marka ka dambaysa suuqa waa Oukitel. Waa magac bilaabaya inuu caan ku noqdo, in kasta oo ay tahay shirkad dhowaan soo baxday.
Oukitel waxaa la aasaasay sanadkii 2007 magaalada Shenzhen ee dalka Shiinaha. Magaaladan waxaa lagu qeexi karaa inay tahay caasimada tikniyoolajiyadda dalka, oo ay ku yaalliin shirkado badan oo qaybta ka tirsan. Waxay ahayd ilaa sanadkii 2008 in taleefanada ugu horeeya ee shirkada ay bilaabeen inay garaacaan dukaamada. Sannadkii 2009 waxay la kulmeen qayb ka mid ah ballaadhintooda caalamiga ah markii laga furay Shiinaha warshadooda tan iyo markaas, Oukitel wuxuu ku mashquulsanaa suuqa Android.
Suuqyadeeda ugu waaweyn waa Aasiyaan, oo leh waddamo sida Shiinaha ama Kuuriya ah. Laakiin muddo dheer ayay fududahay in taleefannadooda laga iibsado Yurub. Oukitel wuxuu bilaabayaa moodooyin qiimo dhimis leh laakiin qeexitaano wanaagsan. Badanaa waxay diiradda saareysaa heerka dhexdhexaadka iyo kala-goynta. Waxay sidoo kale badanaa u istaagaan baytariyada waaweyn.
Oukitel WP15: tilmaamaha, qiimaha iyo helitaanka
Xilligii 5G waa halkaan, laakiin ma jiraan wax xitaa ka wanaagsan in 5G lagu haysto moobilkayaga? Haa, xisaabi ...
WP15 waa casriga cusub ee Oukitel oo leh batari 15.600 mAh
Bateriga ayaa weli ah mid ka mid ah madax -xanuunka ugu weyn soo -saareyaasha iyo adeegsadayaasha badankood….
Oukitel WP6 cusub ayaa la iibinayaa bisha soo socota ee Maarso 20
Markaan iibsaneyno taleefan casri ah oo cusub, waa inaannaan kaliya ku saleysneyn qiimaha, inkasta oo ay badanaa tahay midka ugu weyn ...
OUKITEL C17 Pro hadda waa laga iibsan karaa $ 84,99
Maalmo ka hor waxaan horey kuugu sheegnay in OUKITEL C17 Pro si ku meel gaar ah loo bilaabi doono qiimaha ugu fiican. A…
Soo ogow sida loo helo OUKITEL C17 Pro
Toddobaad ka hor waxaan si rasmi ah ula kulannay OUKITEL C17 Pro. Nooc cusub oo ah nooca Shiinaha, kaas oo ...
OUKITEL C17 Pro, la yaabi kamaraddeeda saddex-geesoodka ah
by Rafa Rodríguez Ballesteros samee 2 sano .
Waxaa jira qoraallo dhowr ah oo aan ugu talagalnay taleefannada casriga ah ee OUKITEL. Qeyb weyn maxaa yeelay ...
U keydi Oukitel Y4800 cusub $ 199 kaliya
Toddobaadyadii la soo dhaafay, waxaan ka hadalnay dhowr jeer oo ku saabsan terminalka soo socda ee shirkadda Aasiya ee Oukitel ay ka bilaabi doonto suuqa, ...
OUKITEL Y4800 cusub, 48 Mpx iyo wax kaloo badan
Bixinta taleefannada casriga ah ee dhexdhexaadka ah ee Android ayaa sii kordhaya si aan la xakameyn karin. Waxaanan aragnaa sida ay u muuqato mar kasta ...
Tani waa sida sawirada Oukitel Young Y4800 noo oggolaan doonto inaan u ekaano
Waxaan ka hadleynay soosaarida Oukitel ee soo socota dhowr toddobaad. Waxaan ka hadleynaa Young Y4800, terminal markii hore loogu talagalay ...
Oukitel wuxuu soo bandhigayaa C15 Pro +, oo ah nooca fitamiin ee C15 Pro
Adduunyada taleefanka kuma koobna oo keliya terminaallo heer sare ah, in kasta oo ay iyagu yihiin moodellada ugu badan ...
Oukitel Y4800 vs Xiaomi Redmi Note 7: tijaabada waxqabadka
Markaan cusbooneysiineyno terminaalkeenii hore, waa inaan tixgelin siino qodobo taxane ah si aan awood ugu gaarno, maya ...